कसरी अपकेंद्र स्प्रे ड्रायर सही छनौट गर्न? - चीन Changzhou Daming औषधि उपकरण
कसरी अपकेंद्र स्प्रे ड्रायर सही छनौट गर्न?
अपकेंद्र स्प्रे ड्रायर काममा एक शक्तिशाली भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् भनेर थाह हुनुपर्छ यो उपकरण प्रयोग गरेको छ जो कोहीले, यस सुकाउने दर धेरै छिटो छ, र पनि उत्पादन, सामान्यतया गर्मी संवेदनशील दबाइ सुकाउने उपचार प्रयोग गुणस्तर ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ। साथै, स्प्रे ड्रायर पनि microcapsules तयार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ, र एक राम्रो उपचार प्रभाव हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले हामी कसरी चयन गर्छन्?
सबै को पहिलो, छनौट गर्दा, चुई सधैं उपकरणहरू विभिन्न प्रकारका तुलना गरिएको छ। यो तपाईं ती उपकरणहरू आफ्नो आवश्यकता, संरचना थप नाजुक र एउटै समारोह लागि कम स्थान आवश्यकता जो पूरा चयन गर्नुपर्छ भनेर मनमा राख्न महत्त्वपूर्ण छ।
दोस्रो समस्या, हामी स्प्रे dryers लागि किनमेल गर्दा, चुई राम्रो थप स्वचालित र नियन्त्रण गर्न सजिलो हो कि उपकरणहरूको लागि देख छ भन्ने छ। यसरी, यो जो संचालक को संख्या कम गर्न र लागत बचत गर्न सक्नुहुन्छ, थप सुविधाजनक र सञ्चालन गर्न सरल हुनेछ।
तेस्रो, हामी राम्रो हामीलाई काम पूरा गर्न मद्दत गर्न सक्छ भनेर, विश्वसनीय र स्थिर प्रदर्शन, कम ऊर्जा खपत र उच्च दक्षता संग उपकरण चयन गर्नुपर्छ।
Fourthly, प्रयोगकर्ताहरूले पहिलो आफ्नो वास्तविक आवश्यकताहरु, साथै विशिष्ट सामाग्री र भौतिक गुण स्पष्ट हुनुपर्दछ, र चयन गरिएको उपकरण को चुच्चो को साइज आवश्यकताहरू पूरा सुनिश्चित। त्यो गर्न हामी राम्रो काम समाप्त गर्न मद्दत गर्न सक्छ कि स्प्रे ड्रायर उपकरण चयन गर्नुपर्छ, भन्न छ।
तथापि, उपयुक्त उपकरण चयन गरिएको छ भने पनि, त्यहाँ वास्तविक आवेदन केही समस्या हुन सक्छ। यस समयमा, हामी यसलाई पुन: समायोजन स्प्रे ड्रायर को सेटिङ जस्तै रुचाउने गति, तापमान सेटिङ उचित छ कि छैन भनेर कुनै पनि समस्या, र सामाग्री नै, आदि को विशेषताहरु छ कि छैन भनेर विचार गर्न, र त्यसपछि आवश्यक
पोस्ट समय: अगस्ट-08-2018
सं। 10, विकास क्षेत्र, ZHONGJIANG, ZHENGLU TOWN, TIANNING जिल्ला, Changzhou, Jiangsu प्रांत, चीन।
कसरी अपकेंद्र स्प्रे ड्रायर कोरि चयन गर्न ...